अ,नाधिकृत नेपालको नक्सा छापे २० हजार ज,रिवाना
Homeराष्ट्रिय खबरअ,नाधिकृत नेपालको नक्सा छापे २० हजार ज,रिवाना
May 26, 2020 kandai kanda 1 राष्ट्रिय खबर
काठमाडौं । हालै जारी भएको अध्यावधिक नेपालको नक्सा नापी विभागको स्वीकृतिविना व्यवसायिक रुपमा मुद्रण गरी बिक्री वितरण गरे का,रवाही गर्ने चे,तावनी दिएको छ । यसअघि पनि गत जेठ १० गते विभागले सूचना जारी गर्दै अ,नाधिकृत रुपमा नक्सा छाप्न वा बिक्री वितरण नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
मंगलबार विभागले दोस्रो पटक अर्को सूचना निकालेर कानुनविपरित नगर्न सचेत गराएको हो । यसरी का नुनविपरित कसैले नक्सा छापे वा बिक्री वितरण गरे २० हजार ज रिवाना र सो सामाग्री बरामद गर्न सकिने विभागको भनाई छ ।
‘कुनै पनि नक्सा प्रकाशन, मुद्रण तथा बिक्री वितरण गर्न नापी विभागको स्वीकृत लिनुपर्ने विषय जग्गा नाँप जाँच ऐन २०१९ को उपदफा ११ घ व्यवस्था भएको हुँदा सो बमोजिम स्वीकृति लिई प्रकाशन, मुद्रण तथा बिक्री वितरण भए नभएको अनुगमन हुँदा सो का नूनी व्यवस्था वि परित पाइएमा त्यस्ता का नुन विपरित गर्ने गराउने उपर नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा १२ को उपदफा ५ बमोजिम का रवाही हुने व्यहोरा पुन स्मरण गराउँदै यस प्रकारको गर्न नगराउन सवैलाई जानकारी गराइन्छ’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।-रातोपाटी
यसरी वीरगञ्जमा डा,क्टरका दुई समूहबीच कु,टाकुट भएपछि
दशगजा मि,चेर बनाएको बाँध भारतले न,भत्काए नेपालले भ,त्काउछ : प्रजिअ घिमिरे
liquid tadalafil – buy tadalafil pills cheap tadalafil
crackhead propecia – http://propechl.com/ order generic propecia
tadalafil canadian pharmacy – http://xtadalafilp.com/ tadalafil generic
Kxvqjz – modafinil interactions Uyrhyd kwovup
Mgewln – tadalafil dose Eglyif oouhvc
Bynpvk – furosempi.com Nddsxj mtqrif
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल, केहीदिनको बेड रेस्टपछि नेपाल फर्किने
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ । दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो । उनको केही समयअघि दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा नेप्रोलोजिस्ट डाक्टर अखिल मिश्राको नेतृत्वमा उपचार भइरहेको थियो । बुधबार सर्जन डाक्टर सन्दीप गुलेरियाको नेतृत्वमा रहेको […]
धवार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने चाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन सुन प्रति तोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस दिन चाँदी […]
नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित, बिहीवार बस्ने
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)को वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । बुधवारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीवार(भोली) बस्नेगरी स्थगित गरिएको एक नेताले जानकारी दिए । केही केन्द्रीय सदस्यहरु उपत्यका बाहीर रहेको र बुधवारको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको ति […]
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिशनमा जानका लागि नेपाल प्रहरीले लिने आन्तरिक परीक्षा (प्रि–स्याट) को प्रश्नपत्र ‘लिक’ भएको आशंकामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानविन गरिरहेको छ । साउन १५ र १६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा ७ वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा परिक्षा सञ्चालन भएको थियो । परीक्षामा जवानदेखि प्रहरी […]
शुरू भयो एमाले स्थायी कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक
विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न लगातार तीन दिनदेखि बसिरहेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठक शुरू भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा स्थायी कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक शुरू भएको हो । शनिवार र आइतवार दुई दिनसम्म बैठक बसेपनि ठोस निर्णय केही […]
तपाइको यो साता कति शुभ? हेर्नुहोस् साउन १७ गते देखी साउन २३ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
तपाइको यो साता कति शुभ? हेर्नुहोस् साउन ३ गते देखी ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
तपाइको यो साता कति शुभ? – हेर्नुहोस् असार २७ गते देखी साउन २ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् असार १३ गते देखी असार १९ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
काठमाडौं उपत्यकामा ८५९ सँगै देशभर थपिए ३८४० कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर तीन हजार ८४० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ८५९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा ९४, ललितपुरमा २०६ [...]
नेपालमा कोरोना : ३ हजार ४२१ जना संक्रमित थपिए, २५ जनाको मृ,त्यु
मोटोपन धेरै बढेपछि त्यसलाई घटाउन ,अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय !
छिनछिनमा रिसाइरहने, झोक्किने र रोइरहने हुन्छन्,बच्चामा यसरी गराउनुस् शान्त स्वभावको विकास
संक्रमित भन्दा निको हुने ७ सयले बढी, मृ,तक कति ?
खाद्यान्न सं,कटले;उत्तर कोरियामा ५ हजार रुपैयाँमा एक किलो केरा
उत्तर कोरियमा खाद्यान्न संकट छाएको छ । खानेकुराको मूल्य आकासिँदा त्यहाँका नेता किम जोङ उनले पनि परिस्थिति चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । किमले भने, ‘खाद्यान्न अभावको स्थिति छ किनकि पोहोर साल कृषि क्षेत्रमा आँधीबाट क्षति पुगेपछि अनाज उत्पादन योजना सफल हुन सकेको छैन ।’ राजधानी प्योङयाङमा केरा पाँच […]
के फाइनलमा भेट्लान त नेयमार र मेस्सी ?
काठमाडौं । जारी कोपा अमेरिका २०२१ अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल चरणका सम्पूर्ण खेल सकिएका छन्। कुल १० राष्ट्र सम्मिलित यस संस्करणको कोपा अमेरिकामा अब मात्र ४ राष्ट्र बाँकि रहेका छन्। क्वार्टर फाइनल चरणबाट दुई उपाधि दावेदार टोलीहरु बाहिरिए। सन् २०१५ र सन् २०१६ को कोपा विजेता चिले ब्राजिलसँग क्वार्टर […]
युरो कप २०२० : क्वार्टर फाइनलमा को-को भिड्दै ?
काठमाडौं । जारी युरो कप २०२० अन्तर्गत अन्तिम १६ का सम्पूर्ण खेल समापन भएका छन्। कुल २४ राष्ट्र सम्मिलित यस प्रतियोगितामा समूह चरणका खेल अन्त्य हुँदा ८ राष्ट्र बाहिरिए। त्यस्तै अन्तिम १६ का खेल सकिँदा अर्को ८ राष्ट्र प्रतियोगिताबाट बहिरिसकेका छन्। अन्तिम १६ का ‘नकआउट’ खेलबाट बाहिरिने टोलीहरूमा […]
अर्जेन्टिनाद्वारा बोलिभिया पराजित, मेस्सीले गरे दुई गोल
काठमाडौं । जारी कोपा अमेरिका २०२१ अन्तर्गत मंगलवार बिहान भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई ४-१ गोलले पराजित गरेको छ। ब्राजिलको माटो ग्रोसोस्थित ‘एरेना पान्टानाल’मा भएको दक्षिणी समूहको खेलमा अर्जेन्टिनाले शुरुवाती ६ मिनेटमै अग्रता लिएको थियो। कप्तान लियोनल मेस्सीको पासमा मिडफिल्डर एलेजेन्द्रो गोमेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो […]